Tongasoa eto amin'ny Bestar mandeha ho azy ny varavarana!
Fizaha avy eny ambony Sectional Doors
Prepainted nandrisika Coils
Bestar Automatic varavarana Co., Ltd, niorina tamin'ny taona 2006, dia nitarika-roller shutter mpanamboatra ny varavarana sy ny sectional overehead varavarana ao Shina.
Nitarika Manufacturer ny Roller Shutter Doors & Sectional Fizaha avy eny ambony Doors
Tao anatin'ny 11 taona, isika hifantoka hatrany amin'ny fampandrosoana, nanaovany ary mamokatra vokatra mandeha ho azy varavarana ary ankehitriny efa nanolotra tamin'ny 5 tanàna, ary nampiasa olona 150 mahery.
Efa lasa ny fanamarinana ny ISO9001: 2000 toetra sy ny rafitra fitantanana ny ISO 14001: 2004 rafitra fitantanana ny tontolo iainana, ny vokatra rehetra dia mifanaraka tsara amin'ny 3C tanteraka, taona sy Ul fitsipika.
Ny nisafidy Partner for Roller Shutter Doors & Sectional Fizaha avy eny ambony Doors
Rehefa nifidy Bestar garazy varavarana ho an'ny an-trano na ny atrikasa, dia afaka mankafy ny hatsaran-tarehy, ny fiarovana sy ny fiadanana izany. 24/7 Service & Support ekipa dia ho vonona ho anao amin'ny fotoana rehetra.
Tamin'ny faran'ny taona 2016, efa naondrana ny 20 mahery amin'ny firenena, toa an'i Etazonia, Kanada, Meksika, Brezila, Columbia, Aostralia, Japana, Korea, Singapore, Thailand, Vietnam, Emira Arabo Mitambatra, Qatar, Arabia Saodita sy ny sisa, dia maro ny ireo no lasa nitarika orinasa ao an-toerana varavarana tsena mandeha ho azy.
Bestar Automatic varavarana Co., Ltd
Vahoaka: + 86-13821967889
Copyright © Bestar Automatic Doors Co., Ltd. Zo rehetra voatokana